Downloads 21 243
Waxay abuureen 31-01-2011
Author: Tusaale ahaan Brian Franklin (Simshed). Qalbi iyo qalab by Jim Cooper, qalabixinta FSX / P3D by Philippe Wallaert, Rikoooo
La cusbooneysiiyay 29 / 08 / 2017: Guddi cusub oo 2D loogu talagalay shaashadda ballaaran (16 / 9), oo lagu daray hadda oo ku habboon diyaarinta vvnUMX v3, v1, v2 iyo v3. Qalab rakibay qalabka saxda ah 4
The Hawker Siddeley Nimrod waa diyaarad a ilaalada badda ee Air Force Royal. Waa bedelka ee Shackleton Avro ah. Waxay ku salaysan tahay De Havilland dhagax xiddig sida Hawker Siddeley (hadda BAE Systems ku lifaaqan) ayaa bedelay.
Qalabkan dhammaystiran wuxuu ka kooban yahay moodalada Nimrod MR1, MR2 iyo R1. Qaar ka mid ah sawirada (iwm) ee nooc kasta ayaa lagu daray.
Ku-kordhinta waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo bacda-vargalka (VC), laakiin waxaa sidoo kale ku jira guddi 2D. ku raaxee.
yaxaas A of technology, a quusta ugaadhsade weyn. ka diyaaradii ugu horeysay ee diyaarad loogu, ka dhagax xiddig, noocooda hore ee Siddeley Hawker ku Nimrod qaadeen markii ugu horeysay May 23, 1967. Duulimaadka gabadhii ee noocooda labaad ahayd location2 bilood ka dib.
Hadda, sahan ku Nimrod badda sii ergooyinka muhiim ah ay. Nimrod waa in ay boqolaal taariikhda ay ergooyinka guul
On guddiga, haddii ay raad nidaamyada, quusta, daawashada diyaaradaha ama qalab sida wanaagsan sida saraakiisha iyo NCO isticmaala yihiin
Waa qalab awood u ergooyinka ilaalinta deg deg ah oo dheer, Mar. Nimrod MR ku 2 leeyahay nidaamka gundhig casri ah, oo ay ku jiraan radar, magnetometer ah iyo nidaam lagu processing digital xogta loomana baahno.
Waxay qaadi karaan eedeeyay qoto dheer nuclear ama caadiga ah ama torpedoes ama miinooyinka ee a hub badan dhufays. Cutubkani waxaa sidoo kale ku qalabaysan dhibcood lifaaqa garabka hoostiisa lagu lifaaqi karaa in hawada lagu liishaamo ama gantaalaha anti-markab.
British Aerospace Nimrod Package FSX & P3D Download